Gîte du Montison (Ukhenketho, iChâteau de la Loire...)
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguEmilie Et Guillaume
UEmilie Et Guillaume ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-93% yeendwendwe zakutshanje.
Gîte abantu-4 ukuya kwezi-5 kufuphi Tours, i-Loire kunye Indre yi hlayisekile, engekude kwimisebenzi emininzi: iinqaba Loire, iipaki zezilwanyana, Futuroscope, iipaki kwezolonwabo usapho, iimyuziyam, iilali troglodyte neentlambo, nezidiliya ...
Indlu yosapho isanda kulungiswa, kumgangatho ophantsi uya kuba nomgangatho ofikelelekayo ngezinyuko (ezingenakufikeleleka kubantu abanokuhamba okucuthiweyo) kunye nangaphandle, i-WIFI, indawo yokupaka, umhlaba owenziwe ngamaplanga ngojingi.
*** AMASHISHINI NEETAWULI ZIBANDISWA KWIXABISO ***
*** ISIPHELO SOKUHLALA OKUSEKO KUSEKO, UKWANGEZWA KWE-€30 ***
-Igumbi lokulala eli-1 kunye nebhedi ye-140x190cm kunye negumbi elikhulu lokugqoka. (ibhedi zakutsha nje)
-Igumbi lokulala eli-1 elineebhedi ze-bunk (2 iibhedi ze-90x190) + 1 ibhedi yokhuni (60x120cm) kunye nokugcinwa kunye ne-wardrobe. (ibhedi zakutsha nje)
-1 Igumbi lokuhlambela elinebhafu kunye nekholomu enkulu yeshawa, isinki kunye neeyunithi ezinkulu zokugcina.
-1 Igumbi lokuhlala / lokudlela elinendawo yokutyela, iisofa ezi-2 ezingaguqukiyo, ibhedi eyongezelelweyo e-1 (ibhedi e-1 yokugoqa 120x180), i-1 ikona yabantwana abancinci, i-1 satellite TV + i-DVD player.
-Ikhitshi eli-1 elinendawo yokutyela, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, isitovu segesi (i-ceramic hob + i-oveni yombane), i-microwave, umenzi wekofu, iketile, i-toaster, izitya ezahlukeneyo, ....
-6kg umatshini wokuhlamba.
Terrace N° 1 (edibanisa nekhitshi):
-1 ifenitshala yegadi kunye netafile kunye nezitulo, i-parasol, i-charcoal barbecue.
-1 itafile yekhofi kunye neebhentshi ezi-2
Uya kuba nokufikelela kwindawo enkulu enemithi, ejikelezwe ngumsinga (Le Montison) ebekwe phambi kwendlu kunye nojingi lwabantwana.
Umbuki zindwendwe ngu- Emilie Et Guillaume
UEmilie Et Guillaume yi-Superhost